FIKARAKARANA FIFIDIANANA : “Fitaratra ho an’ireo firenen’i Afrika i Madagasikara
Mbola maro ireo asa iandraiketan’ny vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny Céni amin’ity taona ity. Ny aloha indrindra dia ny fikarakarana ny fifidianana solombavambahoaka izay hatao afaka telo volana. 10 février 2019
Dingana lehibe no efa vita tamin’ny fahatanterahan’ny fifidianana Filoham-pirenena. Dingana izay tsy nampitsanga-menatra an’i Madagasikara fa azon’ireo firenena Afrikanina atao fitaratra, raha ny nambaran’ny teo anivon’ny Céni. “Ny Céni eto Madagasikara dia sahiko ny miteny amin’izao fotoana izao fa tokony ho fakan-tahaka. Jereo daholo ny trangan-javatra rehetra manodidina ny fifidianana manerana an’i Afrika dia jereo ny antsika”, hoy ny filohan’ny Céni, Hery Rakotomanana raha nanamafy izany.
Nambarany kosa anefa fa mbola misy hatrany ny lesoka dia ny tsy fahatsapan’ny vahoaka izany zavatra izany, ary eo ihany koa ny tsy fahamatoran’ireo mpanao politika sy ny fitiavan-tena ananan’izy ireo. Ireto farany matetika dia tsy mikatsaka afatsy ny tombotsoany manokana hatrany rehefa misy ny fifidianana hany ka lasa miteraka korontana sy disadisa rehefa tsy mifanaraka amin’ilay tranga andrasany no miseho. “Ny mampalahelo dia ny tsy fahamatoran’ny mpanao politikantsika. Sahiko ny miteny fa raha, ohatra, ka matotra ny mpanao politika malagasy dia mandroso i Madagasikara.
Ny fahamatoran’ny mpanao politika dia ny fanajana ny fahamarinana, tsy ny tombotsoa an’antoko no marina na ny tombotsoa an’antok’olona fa ny tombotsoan’ny vahoaka Malagasy”, hoy hatrany ny nambarany. Ny faran’ny herinandro lasa teo, tonga tany Ambatondrazaka nitokana ny trano natao hikirakirana ny fifidianana any an-toerana ny filohan’ny Céni. Nambarany tao anaty fandraisam-pitenenana nataony fa anisany tsangam-bato hipetraka ho an’ny Faritra Alaotra Mangoro io fotodrafitrasa natsangan’ny Céni io. Io trano io ihany koa no fotodrafitrasa voalohany naoriny izay miteti-bidy hatrany amin’ny roapolo tapitrisa Ariary. “Sivy taona izay no nisian’ny Céni dia ity trano ity no fotodrafitrasa voalohany”, hoy ny filohan’ny Céni.